Samafalayaal lagu afduubtay dalka Koofurta Sudan – Radio Muqdisho
Samafalayaal lagu afduubtay dalka Koofurta Sudan
Saraakiisha Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 10 xubnood oo ka tirsan laamaha gargaarka lagu Afduubtay Gobolka Yei River ee Dalka Sudaanta Koofureed.
Isku-duwaha Qaramada Midoobay , Alain Noudehou, ayaa sheegay in bahda ka shaqaysa howlaha Bani’aadan-nimada ay naxdin ku tahay Af-duubka loo maleynayo in loo geystay shaqaalaha gargaarka.
Afduubka oo ka dhacay duleedka Yei ayaa laga war helay Abracadii, waxaana la sheegayaa inay geysteen Dableey aan heybtooda la garanayn,waxaana sidaasi hay’adaha halkaasi ka hol-gala u sheegay Dadka degaanka Yei.
Koofurta sudaan oo ay inta badan ka dhacaan shaqaaqooyin Siyaasadeed iyo kuwa salka ku haya aano Qabiil ayaa waxaa ka dhaca dilal iyo Afduubyo joogto ah oo lagula kaco Dadka Ajaaniibta ah iyo Shaqaalaha kale ee Qaramada Midoobay.
Maamulka G/Banaadir oo deeq gaarsiiyay barakacayaal ku nool Muqdisho+Sawirro
Madaxda Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya oo la kulmay madax ka socotay IGAD